The Voice Of Somaliland: MADAXWEYNE RAYAALE OO MAGACAABAY XUBIN SHARAFEED GOLAHA GUURTIDA
MADAXWEYNE RAYAALE OO MAGACAABAY XUBIN SHARAFEED GOLAHA GUURTIDA
Hargeisa, Madaxweynaha JSL, Md. Daahir Rayaale Kaahin, ayaa shalay soo saaray xeer uu ku magacaabay Xubin sharafeed Golaha Guurtida ah.
Warsaxaafadeed arrintan ku saabsan oo uu saxaafada soo gaadhsiiyey af-hayeenka Madaxtooyada Cabdi Idiris Ducaale, waxaa uu u dhignaa sidan:- “ Madaxweynaha JSL, Md. Daahir Rayaale Kaahin, Waxaa uu maanta ( Shalay) soo saaray xeer magacaabis Xubin sharafeed Golaha Guurtida, xubin sharafeed Madaxweynuhu u soo xulay Guurtida inuu xubin ka noqdo.
Waxaa uu xeer kaasi odhanayaa Madaxweynuhu:-
Markuu arkay: Qodobka 90 aad Faqradiisa 13 aad ee Distoorka Jamhuuriyada Somaliland. Markuu arkay: Qodobka 60 aad Faqradiisa 2aad, xubintiisa (B) ee Distoorka Jamhuuriyada Somaliland. Markuu arkay: Kaalintii waafiga ahayd ee Wadaniyadu ku dheehnayd ee uu sida hagar la’aanta iyo naf hurida leh ugaga soo qayb qaatay hawlihii nabadaynta, hub ka dhigista iyo guud ahaanba dhismaha iyo hurumarinta Qarankan. Mudane Mohamed Cabdi Aadan ( Dhoore )inuu ahaado Xubin Sharaf ka tirsan Golaha Guurtida Jamhuuriyada Somaliland Talaabadan uu qaaday Madaxweynuhu, waxay daba socotaa talaabooyinkii uu hore ugu magacaabay jagooyin xukuumada ah Raggii waayey Musharaxnimadii Xisbiga UDUB, si uu u soo jiito Beelahooda.